I-Stephan El Shaarawy Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts
ikhaya AMAZIKO E-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali bebhola base Italiyane I-Stephan El Shaarawy Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo le-Football Genius eyaziwa kakhulu ngeNqampu; "UFaro". Ibali lethu le-Stephan El Shaarawy Childhood kunye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela ngexesha lokuzalwa kwakhe. Uhlalutyo lubandakanya ibali lobomi bakhe phambi kobuqili, ubomi bentsapho kunye ne-OFF kunye ne-ON-Pitch engaziwayo malunga naye.
Ewe, wonke umntu uyazi malunga nesantya sakhe, ukuhamba kunye nobuchule, kodwa bambalwa bacinga uStephan El Shaarawy's Bio onomdla kakhulu. Ngoku ngaphandle kokunye okunye, masiqale.
I-Stephan El Shaarawy Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts -Obomi bakwangoko
UStephan Kareem el-Shaarawy wazalwa ngomhla we-27th ngo-Oktobha 1992, eSasona, e-Italy. Wazalelwa kumama wakhe waseTaliyane, uLucy El Shaarawy noyise waseYiputa, uSabri El Shaarawy ngenxa yeemeko zezoqoqosho ezinzima ephuma eYiputa waza wabuyela eItaly ukuze aqale intsapho yakhe. Ngezantsi umfanekiso wesibini abazali.
Njenge Edin Dzeko, UStephan wakhuliswa njengomntu ongumSilamsi kwaye wakhula kunye nomzalwana wakhe kuphela uManuelel Shaarawy oza kuba ngummeli wakhe kunye nomxhasi omkhulu webhola.
Ibali likaStephan ebuntwaneni linomdla, ukuba akuqhelekanga - yinto encinci yenkwenkwe encinci eyayifumana itsikelele nge talente engavamile. Enyanisweni, yena waphupha ibhola kusukela ebuntwaneni bakhe. Njengomntwana, uStephan wasetyenziselwa ukudlala imidlalo emininzi kodwa wayenamathela kwibhola. Xa wayeneminyaka emihlanu okanye ezintandathu, abazali bakhe bamvumela ukuba ajoyine i-Legino, iqela lase Savona. UStephan wahlala apho de kube ngu 11.
Nangona egxininise ekubeni ngumdlali webhola, uStephan wayesenokwazi ukubonga umama wakhe. Wayengaphezulu kweklasi yakhe. Abazali bakhe bavuma ukuba unyana wabo kufuneka agqibe isikolo ngaphambi kokubhalisa kwiqela lakhe lokuqala njengoko kuboniswe kwi-ID engezantsi.
Ngenxa yezifundo, u-El Shaarawy waba ngumdlali wexesha elide emva kwebhola. Waqala umsebenzi wakhe wobutsha kunye noGenoa ngokukhawuleza eneminyaka eli-14. Ngaphandle kokuqala emva kwexesha, uStephan waphula kwiqela lokuqala kwaye akukho nto yamnceda ukuba akhule kuyo yonke imiphumo yemidlalo. Ngokubukela iividiyo ze-Kaka wakhe umzekelo, uStephan wathatha i-springboard eyabangela ukuphucula okuqhubekayo.
Uyise wakhe wanikela ngokumnika yena kunye nabahlobo bakhe bebhola ukuba bancedise ukudlala kwindlu yakhe encinci emva kwendlu yakhe yentsapho engayiqondi ingxolo enokubangela.
I-Stephan El Shaarawy Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts -Ukunyuka Kwigama
UStephan wayekholelwa kuye kwaye wabonisa ukuzimisela nokuzimisela kuyo yonke into awayenzayo.
Ukufikelela kwebhola, kwakuninzi malunga noko akwenza ngentloko yakhe kunemilenze yakhe. UStephan wahlala ethobekile ngokuphumelela nokulahlekelwa yiimeko. Wayetyenziselwa ukuhlenga isiluleko kubahlobo bam nosapho kwiindawo anokuphucula kuzo. Ngomhla ka-21 Disemba 2008, xa wayeyiminyaka eyi-16, wenza iqela lakhe lokuqala ukuba abe ngumdlali mncinane wesibhozo kwimbali yeSerie A ukuba enze iqela lakhe kwiqela eliphezulu laseNtaliyane.
Nangona kunjalo, umsebenzi wakhe wabuhlungu ngenxa yecandelo le-iiiprojethi ze-njury-hit hit phakathi kwe-2013 ukuya kwi-2015. Oku kwenzeka emva kokuhlinzwa okwangaphumelelanga kwinqanaba lakhe lokunene elahluleka ukuphilisa ngokufanelekileyo. Emva kwexesha lokungabikho kwexesha elide ngenye inzakalo, iqela lakhe, uMilan wanquma ukumthumela eMonaco ngetyala lexesha elide kunye nenketho yokuthenga.
Ngoxa wayebolekisile, uMonaco wamdlalela kwaye inkundla yakhe yaba yimbi. Ngaloo mzuzu-mboleko efanayo, uStephan waqhwala kwi-squad ngexesha elithile elenza umdlalo we-1 mfutshane noMonaco owenza uxanduva lokumthenga. Ngothukile, wathunyelwa eMilan wamkhawuleza wamboleka e-Roma njengoko isivumelwano sabo semali-mboleko sasizilungele kwaye sisigxina. Ummangaliso weza xa uStephan e-ahi-alf scorpion iguqulwe umgomo we-backheel (Ividiyo phantsi) kwiRom eyenza ukuba yakhe ihlale isigxina. Bonke abanye, njengoko bethetha, ngoku iimbali.
I-Stephan El Shaarawy Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts -Ulwalamano lobomi
Ingxelo ithi uStephan waqalisa ubudlelwane bakhe kwindawo yokudlala ngobumnandi bakhe, u-Ester Giordano. Ulwalamano lwabo lwalususa kwi-bestie isimo sothando lwenene. UStephan uye wakhumbula ukuba enye yezinto azikhumbulayo zokuqala ebuntwaneni ezazivakalisa uthando lwakhe ngo-Ester kwaye bakholelwa ukuba bangatshata ngolunye usuku.
Ngaphandle komsebenzi wakhe wobugcisa, uStephan El-Shaarawy uyaziwa ukuba uyonwabile ebomini kunye nentombi yakhe, Ester Giordano obesondelene naye.
Abazange batshatile ngexesha lokubhalwa kwaye abanabantwana abakhethiweyo okanye abamkelweyo. Konke abakwenzayo kukuthandwa imihla ngemihla kwaye bachitha ixesha elifanelekileyo kwibala elwandle.
I-Stephan El Shaarawy Ibali leBantwana Ingxelo Plus Untold Biography Facts-Iimpawu zobuqu
UStephan El Sharawy unempawu ezininzi zobuntu bakhe. Ukuqala, sinika i-LifeBogger yakhe ifowuni engezantsi.
Isitya esithandayo: I-Trofie al pesto - isitya se-Genovese nesidayisi esisikiyo saseCanton.
Amandla akhe: Uyabambisana, unobumbano, unomusa, unengqiqo, uluntu.
yakhe Ubuthathaka: Unokuba yinto engathandabuzekiyo, ugweme izibambano, uya kuthwala inzondo nokuzixhalaba.
Yintoni yena uthanda: Uyakuthanda i-Flyboarding (njengoko kuboniswe kumfanekiso olapha ngentla), ukukholelwa enkolelo, ukuba nemikhosi yohlobo lokuqala, ubumnene, ukwabelana nabanye kunye nokuzonwabisa kumaphandle (kwakhona njengoko kuboniswe ngezantsi).
Oko akuthandayo: Ngamaxesha onke, uStephan akanqwenela ubundlobongela, ukungabi nabulungisa, izandi, ukulandelana.
Isishwankathelo, uStephan unokuthula, ubulungisa, kwaye unenzondo. Ukubambisana naye kubaluleke kakhulu. NgokukaStephan, into efunekayo kubaluleke kakhulu kuye ingundoqo yakhe yobuntu kunye nothando lwakhe ngo-Ester. Ungumuntu olungele ukwenza nantoni na ukuphepha ingxabano, ukugcina uxolo lwakhe nanini.
I-Stephan El Shaarawy Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts -Ubomi Bentsapho
UStephan uvela kwimvelaphi yentsapho ephakathi kunye esebenze nguyise, uSabri El Shaarawy. Bobabini abazali abachazwe ngezantsi baqala ukuba nabantwana babo ngexesha lokugqibela kwe30.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba emva koko njengomntwana, umama kaStephan u-Lucia Shaarawy wayexhasa kakhulu unyana wakhe eqhuba imfundo yakhe ngoxa uyise wayefuna ukudibanisa imfundo kunye nebhola.
Ubhuti: UStephan unomntakwabo ogama linguManuel El Shaarawy. Esikhundleni sokuncika kobutyebi bomntakwabo omkhulu, uManuel ochazwe apha ngezantsi waba ngu-arhente yebhola.
Yonke inombulelo kumama wakhe uLucia. Ngaphantsi kweminyaka eyi-25, uManuel Shaarawy ube ngumnini we-Masters degree holder kuMakethi kunye neShishini zeShishini kwi-Faculty of Economics kwiYunivesithi yamaKatolika ye-Sacred Heart, eMilan Italy. Amava akhe okufunda ngoku ajoyina inkundla yakhe yobungcali ekulawuleni umsebenzi wakhe womzalwana.
I-Stephan El Shaarawy Ibali leBantwana Ingxelo Plus Untold Biography Facts-I zakhe inwele
Ngesinye isikhathi, umculi kaStephan u-Aldo watsho ...Unyana wam oneminyaka emithandathu ufuna iinwele ezinjengezakho. Yintoni enokuyenza? "
"Kukhona enye into enokuyenza kwaye kukumthabatha kwintloko yam! Ndineenene ezintathu-enye e-Savona, enye eMilan nenye apha eRoma. "
Umntwana ka-Aldo wagqiba ekubeni ne-Stephan's hairstyle njengoko iboniswe ngezantsi.
Kuthatha ixesha elingakanani ukuba udibanise iinwele zakho ekuseni? Yisiphi i gel oyisebenzisayo?
Mpendulo kaStephan ..."Kungekude kakhulu. Akufuneki nantoni na ukuyenza kuyo namhlanje. Andiyi kudibanisa. Ndiyayikhupha i-hairdryer, sebenzisa i-wax encinci - kungekhona i-gel - kunye nezinye iifowuni ukuyibeka kwindawo kwaye yile nto. "
I-Stephan El Shaarawy Ibali leBantwana Ingxelo Plus Untold Biography Facts-Idol yakhe
Ngokutsho kukaStephan El Shaarawy ... "Ndandisoloko ndisebenzisa ukubukela iKaka xa ndisemncinci - xa wayese-AC Milan. Wayeyimzekelo yam, kokubili kunye nokucima. Wayesoloko ehamba njengento ephantsi komhlaba, nangaphambi kokuba ndidibane naye. Emva koko ndammazi ngexesha elinye xa sadlala umdlali waseMal Madrid enobungane eMelika kwaye wayefana nangoko ndandicinga - umntu omhle ngaphandle kokuba ngumdlali webhola. "
I-Stephan El Shaarawy Ibali leBantwana Ingxelo Plus Untold Biography Facts-Wenqatshelwe nguYise weLizwe
Ekuqaleni, UStephan wayefanelekile ukudlala Iqela lebhola lebhola lebhola laseYiputa, kodwa iphikisiwe ngumqeqeshi Hassan Shehata abangazi kakuhleukufumana oko "Kungekhona yonke WaseYiputa ukudlala umdlalo welizwe langaphandle ufanelekela ukudlala kwicala likazwelonke ".
Ukuphazamiseka, uEl Shaarawy waqala ukudlala kunye Italy U-17 iqela apho athatha inxaxheba in zombini 2009 UEFA U-17 Euro kwaye i I-2009 yeFIFA ye-17 yeNdebe yeHlabathi.
QHUBEKA: Siyabulela ukufunda iStphan El Sharawy Childhood Indaba kunye neNewold Biography. at LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ubona into engabonakali kakuhle kweli nqaku, nceda ubeke izimvo zakho Qhagamshelana nathi!.
I-AC Milan yeDlalo
IDrama yeBhola yeDlalo
I-Alessandro Bastoni yobuntwana Ibali leNqaku le-Untold Biography
UDaniel Rugani Ibali lobuntwana kunye neNqaku leMbiniso yoBuntwana
I-Federico Chiesa Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold
I-Lorenzo Pellegrini Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold
I-Federico Bernardeschi Ibali loBuntwana leNqaku leNgcaciso yeBantwana yeNqaku
I-Domenico Berardi Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold
I-Gianluigi Donnarumma Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
Ukuhambisa Iindaba zeNtwana zeKean kunye ne-Untold Biography Facts
I-Nicolo Zaniolo Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts
U-Andrea Belotti Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
IGoorgio Chiellini Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-Lorenzo Insigne Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
julia Ngo-Novemba 19, 2018 Kwi-4: 15 pm
Ukusetyenzisa iifayile, qhafaza i-equovocaron en una parte. Sobre su novia, ufune i-hace enye nge-imeyli ye-no-e-ella.
UJorginho Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-David Zappacosta Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-Marco Verratti Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
UMario Balotelli Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts